Ny podiatrist anao
Rakipahalalana momba ny fahasalamana
Politika momba ny fiainana manokana sy cookies
Fanontaniana matetika: mitranga amin'ny andaniny roa ve ny aretin-tratra rheumatoid?
Sokajy: Orthopedy 0
Rehefa mandeha ny aretina dia miparitaka hatrany amin'ny soroka, lohalika, kitrokely, kiho, valahana ary soroka ny soritr'aretina. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia misy ny soritr'aretina amin'ny tonon-taolana roa amin'ny lafiny roa…
Valiny tsara indrindra: Ahoana ny fomba fisorohana ny toenail tsy tafiditra ao anaty fiakarana?
Moa ve ny mpihanika mihidy rantsan-tongotra? Ny kiraro fiakarana vatolampy dia natao hifanaraka tsara, izay ahatonga ny olana. Rehefa apetrakao amin'ny tongotra ny tongotrao…
Maharitra hafiriana ny tadin'ny hazondamosina?
Mandra-pahoviana ny puncture amin'ny lumbar? Ny puncture amin'ny lumbar dia maharitra 30 na 45 minitra, fa mila mijanona mandry ao amin'ny hopitaly ianao mandritra ny…
Fanontaniana matetika: azonao atao ve ny mametraka anesthesia ho an'ny tadin'ny hazondamosina?
Ny fanatoranana eo an-toerana dia atsofoka ao an-damosinao mba hamono ny tranokala alohan'ny hampidirana ny fanjaitra. Hanindrona vetivety ny fanatoranana eo an-toerana rehefa atsindrona….
Ny fanontanianao: Misy fanampiana ara-bola ve ho an'ireo olona voan'ny aretin-tratra?
Ny Patient Access Network Foundation dia manolotra fanampiana ara-bola ho an'ireo olona manana RA, rakotry ny Medicare, izay mila fanampiana amin'ny fandoavana ny sarany any ivelany any amin'ny paosy mifandraika amin'ny fitsaboana fanovana aretina folo nankatoavin'ny FDA….
Tsara ve ny hafanana maina ho an'ny vanin-taolana rheumatoid?
Ny hafanana mando, toy ny fandroana mafana, dia afaka manampy amin'ny fidiran'ny hafanana ao amin'ny hozatra ary mety hanome fanamaivanana ny fanaintainana. Mety hanome sosokevitra maina ny mpitsabo iray…
Inona no mahatonga ny osteomyelitis mitaiza?
Ny ankamaroan'ny tranga osteomyelitis dia vokatry ny bakteria staphylococcus, karazana mikraoba hita matetika amin'ny hoditra na eo amin'ny orona na dia olona salama aza. Afaka miditra ny mikraoba…
Fanontaniana matetika: rafitra inona no miaro ny ati-doha sy ny tadin'ny hazondamosina?
Ny manotra dia fonosana manarona sy miaro ny ati-doha sy ny tadin'ny hazon-damosina. Misy sosona meninges telo: Dura mater, izay akaiky indrindra ny taolana. Arachnoid, izay…
Inona no mitranga rehefa tsy manana tendon ianao?
Raha tsy voatsabo, dia mety hiteraka olana amin'ny tongotra sy tongotra hafa izany, amin'ny farany, toy ny fivontosana sy ny fanaintainan'ny ligamenta amin'ny faladianao (plantar…
Firy minitra isaky ny kilao no mahandro ny valahin-kisoa?
Mandra-pahoviana no tokony handrahoana ny felam-kisoa na henan-kisoa? Ny fitsipiky ny ankibontsinanan'ny henan-kisoa dia ny fandrahoana azy ireo mandritra ny 25 minitra isaky ny pounds…
1 2 ... 6,772 Manaraka
А momba ny mpanoratra
Salama, Mary no anarako. Ao amin'ny bilaogiko dia mizara lahatsoratra mahaliana momba ny asako aho - dokotera orthopedic aho.
Fanontaniana: Afaka manasitrana ny vanin-taolana ve ny PRP?
Inona no tsapanao rehefa voan'ny osteoporose ianao?
Ny fanontanianao: Inona no hitranga raha mandeha be loatra aho aorian'ny fanoloana hip?
Fanontaniana: Inona no ataon'ny aretin-septika amin'ny vatana?
Azonao atao ve ny manao baoty Cowboy miaraka amin'ny tongotra prosthetic?
Mety miteraka osteomyelitis ve ny UTI?
Ny fanontanianao: Tsara amin'ny osteoarthritis i Ashwagandha?
© 2021 Ny podiatrist anao
Contacts | Momba anay | Politika momba ny fiainana manokana sy cookies
TANDREMO HO AN'NY MPITONDRA TSARA! Ny fitaovana rehetra dia apetraka amin'ny tranokala hentitra ho an'ny fampahalalana sy fanabeazana! Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao ny fandefasana fitaovana, dia aza hadino ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana ary hesorina ny fitaovanao!